Saynisyahanno gacan ka geystey la dagaallanka aaladda SARS aaladda COVID-19 dagaalka | Runta Caalamka
Saynisyahanno gacan ka geystey la dagaallanka aaladda SARS aaladda COVID-19 dagaalka
Cheng Jing, saynisyahan ay kooxdiisu soo saartay DNA-gu ugu horreeyay ee "chip" si loo ogaado SARS 17 sano ka hor, ayaa si weyn wax ugu biirinaysa dagaalka lagula jiro cudurka dilaaga COVID-19.
In ka yar hal toddobaad, wuxuu u horseeday koox sameynta xirmo isku mar wada ogaan kara lix fayrasyada neef-mareenka, oo ay ku jiraan COVID-19, oo ay la kulmaan baahida degdega ah ee ogaanshaha daaweynta.
Wuxuu dhashay sanadkii 1963, Cheng, waa madaxweynaha shirkadda leh cilmiga noolaha ee 'CapitalBio Corp', oo ah kuxigeenka Golaha Shacbiga iyo cilmiga cilmiga injineerinka ee Shiinaha.
Bishii Janaayo 31, Cheng wuxuu ka soo wacay Zhong Nanshan, oo ah khabiir caan ah oo ku takhasusay cudurka neef-mareenka, oo ku saabsan kiisaska cudurka sanbabka ee coronavirus-ka, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Science and Technology Daily.
Zhong wuxuu isaga u sheegay dhibaatooyinka ka jira isbitaalada la xiriira tijaabada aashito-ga.
Calaamadaha COVID-19 iyo hargabku waa isku mid, kuwaas oo ka dhigtay tijaabada saxda ah xitaa ka sii muhiimsan.
Aqoonsiga fayraska si dhakhso leh si loo kala saaro bukaanka si loo daweeyo loona yareeyo caabuqa ayaa muhiim u ah xakameynta cudurka.
Xaqiiqdii, Cheng waxay horey u aasaastay koox baaritaan ku sameeya baarista sheekada 'coronavirus-ga ee novel' ka hor inta uusan taleefan ka helin Zhong.
Bilowgii, Cheng wuxuu hogaaminayay koox ka socota jaamacada Tsinghua iyo shirkada inay joogaan sheybaarka habeen iyo maalinba, adoo adeegsanaya daqiiqad kasta si loo hormariyo qalabka cusub ee loo yaqaan 'DNA chip and qalab test'.
Cheng had iyo jeer waxay cunaan noodles deg deg ah waqtiga. Wuxuu keenay shandadiisii ​​oo maalin walbo u kaxeeyey si uu diyaar ugu noqdo dagaalka 'magaalooyinka kale'.
Cheng ayaa yidhi, waxay qaadatay laba asbuuc in lagu sameeyo bakteeriyada DNA-da ee loo yaqaan 'SARS 2003'. Markan, waxaan qaadanay wax ka yar hal toddobaad, "ayuu yidhi Cheng.
"La'aanta qibradeedii qarniga ee aan soo uruurinay sanadihii la soo dhaafay iyo taageerada joogtada ah ee aan ka helno dalka waaxdan, uma suuragalin karno howsha in si dhakhso ah loo dhameystiro."
Cuntada loo adeegsaday in lagu baaro fayraska SARS waxay u baahday lix saacadood si loo helo natiijooyinka. Hadda, chip-ka cusub ee shirkadda wuxuu tijaabin karaa 19 fayras neef-mareenka hal waqti gudaheed hal saac iyo badh.
In kasta oo kooxdu ay soo gaabiyey waqtiga cilmi-baarista iyo horumarinta chip-ka iyo aaladda tijaabada, habka oggolaanshaha looma fududaan oo saxnimadiisu marna hoos uma dhicin.
Cheng wuxuu la xiriiray afar isbitaal si loogu sameeyo baaritaanno caafimaad, halka heerka warshadaha uu yahay seddex.
Cheng ayaa yidhi "Aad ayaanu uga xasilloon nahay waqtigii u dambeeyay, oo aan wajahayno cudurka faafa," ayuu yidhi Cheng. Marka la barbardhigo 2003, hufnaanteena cilmi baarista, tayada waxsoosaarka iyo awooda waxsoosaarka ayaa dhamaantood horumar badan sameeyay.
22-kii Febraayo, xirmada ay diyaariyeen kooxdu waxaa oggolaaday Maamulka Waxsoosaarka Caafimaadka Qaranka oo si dhaqso leh ayaa loogu isticmaalay safka hore.
Bishii Maarso 2, Madaxweynaha Xi Jinping wuxuu kormeeray magaalada Beijing si loo xakameeyo cudurka faafa iyo ka hortagga sayniska. Cheng wuxuu siiyay warbixin 20-daqiiqo ah oo ku saabsan sida loo adeegsaday tikniyoolajiyadda cusub ee ka hortagga faafista iyo guulaha cilmi-baarista ee xirmooyinka baarista fayraska.
Waxaa la asaasay 2000, Xarunta 'CapitalBio Corp' ee aasaasiga ah ee kabista ku ah ee loo yaqaan "CapitalBio Technology" waxay ku taal aagga hormarinta dhaqaalaha iyo teknolojiyadda Beijing, ama Beijing E-Town.
Qiyaastii 30 shirkadood oo aagga ka mid ah ayaa si toos ah uga qaybqaatay dagaalka lagula dagaallamayo cudurka faafa iyaga oo soosaaraya isla markaana soo saaraysa agabyo ay ka mid yihiin mashiinnada neefsashada, robots-yada dhiigga, mashiinnada is-daahirinta, xarumaha baaritaanka CT iyo daawooyinka.
Intii lagu gudajiray labada kalfadhi ee sanadkan, Cheng wuxuu soo jeediyay in waddanku dardar geliyo sameynta shabakad caqli badan oo ku saabsan cudurrada faafa ee waaweyn, kuwaas oo si dhakhso leh ugu gudbin kara macluumaadka ku saabsan cudurka iyo bukaannada mas'uuliyiinta.